यी ७ कुराहरु गोप्य राख्नुहोस्, तपाईको जीवनमा सधै सफल हुन्छ – Khabar Silo
यी ७ प्राणीलाई निन्द्राबाट कहिल्यै उठाउनु हुँदैन, यस्तो छ अनौठो कारण ?
सर्प, राजा, बाघ, अरिंगाल, बालक, पराईको कुकुर र मुर्ख निदाएका छन् भने यिनलाई कहिल्यै उठाउने प्रयास नगर्नु नै उचित हुने गर्छ ।
यस धर्तिमा अनेकौं जीव जनावरको बसोबास रहेको छ । हरेक प्राणिको आ–आफ्नै अस्तित्व रहेको छ । त्यस्ता प्राणी को रहन सहन र खान पान पनि फरक हुने गर्छ । कतिपय त्यस्ता प्राणिहरु छन जसलाई सुति रहेको बेला हामिले ब्युझाउनु हुदैन । त्यस्तै सात प्राणिको बारेमा हामी कुरा गर्दै छौं । सर्प, राजा, बाघ, अरिंगाल, बालक, पराईको कुकुर र मुर्ख निदाएका छन् भने यिनलाई कहिल्यै उठाउने प्रयास नगर्नु नै उचित हुने गर्छ ।
तर विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भोकले व्यकुल, भयग्रस्त व्यक्ति, भण्डारे र द्वारपाल निदाएका छन् भने यिनलाई उठाई दिनुपर्छ । यिनिहरुलाई उठाउदा धर्मा प्राप्त हुने बिश्वास गरिन्छ । चाणक्य भन्छन्, संसारमा सबै कुरा जो समस्या बनेर खडा भएको हुन्छ त्यसको समस्याको समाधान पनि छ । त्यसको औषधि छ । तर मुर्खता निर्मूल पार्ने कुनै औषधि नै छैन ।
मुर्ख र काँडाबाट टाढा रहने दुईवटा मात्र उपाय छन्, जुत्ताले मुख फोर्नु र टाढैबाट त्याग गरिदिनु । यस्तै मुर्ख मानिसहरु देखि टाढा नै रहनु उचित हुने गर्छ । मान्छेको जात जस्तो देखिए पनि मानिस पनि दुई खुट्टटे प्राणी हो । मानिस पनि पशु नै हो ।
यस्ता संकेत देखिए सम्झनुहोस् तपाईंको जीवनमा सफलता प्राप्त हुदैछु ! कुनै पनि व्यक्तिको पैसासँग जोडिएको इच्छा कहिले पुरा होला ? धनकी देवी महालक्ष्मीको कृपा कहिले मिल्ला ?यो जान्नका लागि ज्योतिष शास्त्रमा केही संकेतबारे उल्लेख गरिएको छ। मान्यता छ कि जहिले पनि यस्ता संकेत देखिन्छन्, त्यतिबेला सभ्झिनु पर्छ कि व्यक्तिलाई धनकी देवी लक्ष्मीको कृपा मिल्नेवाला छ।यस्ता […]
विहीबार देवताका गुरु बृहस्पति तथा भगवान श्री हरि विष्णुको पूजा गरिन्छ । आजको दिन व्रत बस्नाले धन, पुत्र तथा विद्या प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ । पहेलो रंगको कपडा लगाउने र पहेलै वस्तुको दान गरेमा शुभ मिल्नेछ । साथै, यो दिन विष्णुकी पत्नी लक्ष्मीको पनि पूजा गरिन्छ । यो व्रत शुक्लपक्षको पहिलो विहीबारबाट सुरु […]